Budata Car Mechanic Simulator 2018 maka Windows
Budata Car Mechanic Simulator 2018
Budata Car Mechanic Simulator 2018,
Car Mechanic Simulator 2018 bụ njikọ ikpeazụ na usoro egwuregwu ịme anwansị a ma ama.
Egwuregwu nrụzi ụgbọ ala a nke anyị nwere ike igwu na kọmpụta gị na -enye anyị ohere iji wuo ma too alaeze ọrụ ụgbọ ala nke anyị. Eserese nke Car Mechanic Simulator 2018, nke etolitere na ndabere dị adị, dịkwa na foto dị mma; mana njirimara na -eme ka egwuregwu ahụ dị iche na ndị ọgbọ ya bụ ọkwa nkọwa. Enwere puku kwuru puku ụgbọ ala nime Mechanic Simulator 2018, a na -egosipụta akụkụ nke ọ bụla ka ọ bụrụ nkọwa kacha mma.
Na Mechanic Simulator 2018, ndị egwuregwu nwere ike ịrụzi ma tee ụgbọ ala nọmụmụ ihe ha. E mesịa, a na-enyekwa anyị ohere ịhazigharị ma kwọọ ụgbọ ala ahụ. Ọ ga -ekwe omume negwuregwu ahụ na anyị nwere ike weghachite ụgbọ ala ochie wee mee ka ha bụrụ ụgbọ ala mara mma. Anyị nwere ike ịga na junkyards na garages maka ọrụ a.
Nime ụgbọ ala simulator 2018, enwere ihe karịrị ụgbọ ala 40 a ga -arụzi, ihe karịrị ngwaọrụ iri, yana ihe karịrị akụkụ 1000 ịhọrọ. Ihe dị mma gbasara egwuregwu a bụ na ọ gụnyekwara onye nchịkọta ụgbọ ala. Ịnwekwara ike ịgbakwunye ụgbọ ala nke gị na egwuregwu site na iji nchịkọta akụkọ a.
Obere usoro chọrọ nke Mechanic Simulator 2018 bụ ndị a:
- 64-bit Windows 7 sistemụ arụmọrụ
- Nvidia GeForce GTX 660 kaadị eserese nwere ebe nchekwa vidiyo 2GB
Car Mechanic Simulator 2018 Ụdịdị
Mmepụta: PlayWay SA